FAQs - Alibaba Amusement in Yangon Myanmar
1. Alibaba တွင် စဆော့ချင် လျှင် ဘာလုပ်ရမလဲ။ How can I start playing at Alibaba Amusement ?
Alibaba တွင် စဆော့ချင်လျှင် Power Card အားပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်သည်။ Power Card အသစ်ပြုလုပ်ရန် Registration Form တွင် ( မှတ်ပုံတင် သို့မဟုတ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သို့မဟုတ် ကျောင်းသားကဒ် ) အားယူဆောင်၍ ကတ်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ Power Card ရရှိပြီးပါက ကောင်တာမှ သို့မဟုတ် Top-up machine မှ point များကို ၀ယ်ယူ ၍ စဆော့ နိုင်ပါသည်။
A new customer has to makeanew Power Card by filling the registration form with an ID ( NRC, Student Card, or Driving License). Can start playing by recharging the Power Card with points from the counter staff or from the top-up machine.
2. Alibaba အရုပ်တွေ က အပြင်မှာ ဘာလို့ မရှိတာလဲ။ Why I can't buy the prizes from Alibaba Amusement from other places ?
Alibaba သည် ဂျပန်အရုပ် company (Sega, Banpresto,…..) မှ လိုင်စင်ရ အရုပ်များ ကို တစ်ဦးထဲသာ ရရှိထားသည်။ Disney , Japanese Anime နာမည် ကြီး character များ အား အမွေးပွရုပ် များ အပြင် figure များ ပါ လိုင်စင်ရရှိထား ခြင်းဖြစ်သည်။ အရုပ်များ အား အရုပ်ကောက်စက်များ မှသော်လည်းကောင်း ကစား၍ ရရှိသော ticket များဖြင့် လဲလည်၍ သော်လည်းကောင်း ရရှိနိုင် သည်။
Alibaba Amusement is the only one who got the license products from Japanese Companys’ ( Sega, Banpresto, …….. ) products such as Disney and Japanese anime characters including plushies and figures. Customers can win prizes by playing at the claw machine and redeem with the tickets.
3. ကတ်ပျောက်ခဲ့လျှင် ဘာလုပ်ရမလဲ ။ What should I do first when I lost my Power Card ?
ကတ်ပျောက်ခဲ့ လျှင် အလီဘာဘာ သို့ အရင် ဆက်သွယ်ပေးပါ ။ ကတ်ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သော ID ကိုပြ ၍ ကတ်အား ပိတ်ထားပေးမည်။ ပျောက်သွားသော ကတ်မှ ရှိသောPoints နှင့် Tickets များအား ကတ်အသစ်သို့ ကူးပြောင်းပေးသည်။
A customer should inform Alibaba Amusement first in case ofalost card with an ID number. We will deactivate your lost card and you can makeanew Power Card with the same amount of points and tickets from the previous card.
4. ဆိုင်ခွဲ တိုင်းမှာ Power Card တစ်ကတ်စီ လုပ်မှဆော့လို့ ရမှာလား။ Do I have to make each Power Card for every Alibaba Amusement centers ?
Alibaba မှ ဆိုင်ခွဲတိုင်း တွင် Power Card တစ်ကတ်ထဲဖြင့် ဆော့လို့ရအောင် ကတ်စနစ်အား update လုပ်ထားပါသည်။
Our Power Card system has been updated so thatacustomer can play at every Alibaba Amusement Center with only one Power Card.